10 taona lasa izay… | NewsMada
10 taona lasa izay…
Par Taratra sur 03/01/2019
Ny tantara, tsy fanadino, indrindra ireo sarotra hadinoana… Janoary 2009, vao nigadona ny taom-baovao, namofompofona krizy ny teto Antananarivo. Nisy ny “Alatsinainy mainty”, ny 26 janoary 2009, nanamaloka tanteraka ny tontolon’ny fandraharahana teto. Tsy hay kosehina satria ny nihosin-dra ny andron’ny 7 febroary 2009, ary niaraha-nahita sy niainana ny tohiny.
10 taona aty aoriana, nanomboka tamin’ny fipoahana lakrimozena, teo Analakely hatrany, ny taona 2019. Nifamadika kosa ny rasa satria ireo mpomba ny filoha teo aloha, Ravalomanana, indray ireto naparitaky ny mpitandro filaminana ireto, noho ny fanaovana hetsika tsy nahazoana alalana.
Izay efa vory saina sy nahatsiaro tsara ny tamin’ny 10 taona lasa, nihoron-koditra avokoa. Mailo ireo mpivarotra manodidina an’Analakely satria efa lasibatra hatrany amin’ny fahavoazana noho ny hetsika politika. Dia hiaina tebiteby lalan-dava toa izany ve?
Tsy ireo mpivarotra irery no mitaintaina fa ny mpanara-baovao rehetra mahatsapa fa tsy fotoan’ny krizy vaovao intsony izao. Vita iny ny fifidianana. Efa tsy azo iverenana intsony izay vita, ankoatra ny fitoriana ara-dalàna, andrasana amin’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana ny valiny.
Fanirian’ny maro, na mpomba an’itsy na mpanohana an’iroa, ny hisian’ny filaminana amin’izay. Mba azo atao ve ny tsy hiverenana intsony amin’ny tranga niseho toy ny tamin’ny 10 taona lasa? Maro izay karazana firarian-tsoa niraradraraka noho ny taona vaovao izay, saingy tena andrasan’ny rehetra ny fandriampahalemana amin’ny lafiny rehetra, hahafahan’ny tsirairay miasa, ary izany no hiteraka fampandrosoana ho an’ny firenena.
Tsy eo Analakely foana ny vahaolana…